Nin booliska ku amray inay 1,000 jeer share dhahaan sawirkiisa si uu isugu dhiibo. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka October 21, 2017	0 151 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin reer Michigan ah ayaa isku dayay inuu booliska ku cadaadiyo fulinta dalab uu doonayo si ay iyaguna ugu fududaato qabashadiisa isaga iyo kuwa lamidka ah haddii ay 1,000 jeer share dhahaan sawirkiisa.
Previous: 17 October – Maalinta Caalamiga Cirib-tirka Faqriga.
Next: Sawirro Cajiib ah – Nin laf-dhabartu wiiqmatay oo lagu guuleystay in dib loogu toosiyo.
La kulan – 12-jirka Maamule iyo Macalinba ka ah Dugsiga uu aas-aasay!
Sababta Hanan iyo John ay u qaateen Diinta Islaamka.